NgoSeptemba 16 I-Zodiac-Ubuntu obupheleleyo beHoroscope - Imiqondiso Yeenkwenkwezi
Eyona Imiqondiso Yeenkwenkwezi Nge-16 kaSeptemba i-Zodiac yiVirgo-Ubuntu obupheleleyo beHoroscope
Nge-16 kaSeptemba i-Zodiac yiVirgo-Ubuntu obupheleleyo beHoroscope
Umqondiso we-zodiac kaSeptemba 16 yiVirgo.
Uphawu lweenkwenkwezi: Intombazana . Olu phawu lumele abo bazalwe ngo-Agasti 23-Septemba 22, xa iLanga lihambisa uphawu lweVirgo zodiac. Kubonakalisa ukucaca okucacileyo, iintloni, imeko ezolileyo yoxolo kunye nokufezekiswa.
Inkqubo ye- IVirgo Constellation ngamabala abonakalayo phakathi kuka-80 ° ukuya -80 ° kunye neenkwenkwezi eziqaqambe kakhulu i-Spica, yenye yeenkwenkwezi ezilishumi elinambini ze-zodiac. Isasazekile kwindawo ye-1294 sq degrees phakathi kukaLeo ukuya eNtshona kunye neLibra eseMpuma.
Igama lesiLatin leNtombikazi, uphawu lwe-zodiac lwangoSeptemba 16 yiVirgo. Igama lesiFrentshi lithi Vierge ngelixa amaGrike alibiza ngokuba nguArista.
Uphawu olwahlukileyo: Iintlanzi. Oku kuphakamisa ukuba olu phawu kunye neVirgo ziyahambelana kwaye zibekwe ngaphaya kwevili lokuvumisa ngeenkwenkwezi, intsingiselo yokuvezwa kunye nokuqonda kunye nolunye uhlobo lwesenzo sokulinganisa phakathi kwezi zimbini.
Ukuziphatha: Imfono. Oku kuthetha ukuba buninzi ubushushu kunye nonxibelelwano olukhoyo kubomi babo bazalwe nge-16 kaSeptemba kwaye banengqondo kangakanani ngokubanzi.
Indlu elawulayo: Indlu yesithandathu . Olu dibaniso lubonisa ukuba iiVirgos zinomdla kakhulu kwimicimbi enxulumene nomsebenzi kwaye zibeka ixabiso elikhulu kukhathalelo lwempilo yazo. Le ndlu yindawo yokusebenza kakuhle, inkonzo kunye nemicimbi yezempilo.
Umzimba olawulayo: Imercury . Le planethi kuthiwa ilawula ithuba kunye noburharha kwaye ikwabonisa ubunyulu belifa. I-Mercury ilawula ukuhamba umgama omfutshane.
Isiqalelo: Umhlaba . Le nto ifuzisela ulwakhiwo kunye nokusebenza kwaye kuthathwa njengokulawula abantu abazithembileyo nabachubekileyo abazalwe ngoSeptemba 16. Umhlaba ufumana intsingiselo entsha ngokudibana nezinye izinto, ukumodareyitha izinto zamanzi nomlilo kunye nokudibanisa umoya.
Usuku lwethamsanqa: uLwesithathu . Olu suku luphantsi kolawulo lweMercury kwaye luphawu lokukhawuleza kunye nendlela. Ikwachonga ubunyani benyani yabantu baseVirgo.
Amanani anethamsanqa: 1, 5, 12, 13, 20.
Ulwazi oluthe kratya ngoSeptemba 16 Zodiac ngezantsi ▼
Matshi 4 Imihla yokuzalwa
indlela yokuvula umfazi onomhlaza ebhedini
aprili 8 1994 usuku lweveki
Indoda yamadoda kunye nolwalamano lwabasetyhini
ngowuphi umqondiso 2
indoda eyi-virgo kunye ne-sagittarius woman